कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको भनेर विज्ञले दिएको यस्तो तथ्य, दुनियाँ चकित ! – Suchana Hub
कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको भनेर विज्ञले दिएको यस्तो तथ्य, दुनियाँ चकित !
काठमाण्डौ । अहिले सिङ्गो विश्वलाई कोरोना भाइरसको म’हामारीले आफ्नो च’पेटामा पारेको छ । विश्वभर म’हामारीका रुपमा फैलीरहेको यस कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का बारेमा अहिले अनेकौं प्रश्नहरु उठेका छन् । साथै कोरोना भाइरसका बारेमा अहिल एविभिन्न किसिमका नयाँ तथ्यहरु पनि बाहिर आइरहेका हुन्छन । सामान्य रुपमा हेर्दा अहिले कोरोना भाइरस एक प्राकृतिक म’हामारी भएको बताइन्छ ।
सुरुवातमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हावाबाट कोरोना फैलन सक्छ भनेको थियो । मान्छेहरुको सम्पर्कमा आउँदा मात्र कोरोना सर्छ भन्ने कुरा धेरै पछि मात्रै जानकारी दिएको थियो । अहिले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई स्थिर राख्न सहयोग गर्ने पादबाट पनि कोरोना सर्छ भन्दै केही चिकित्सक बाहिर आएका छन् । तर उनीहरुको कुरालाई विज्ञहरुले भने प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
खोक्दा, थुकका थोपा, हात मिताउँदा वा सं’क्रमितहरुको सम्पर्कमा आउँदा मात्रै नभएर पादबाट पनि कोरोना सर्न सक्छ भनेर एकजना डाक्टरले भनेका छन् । अस्ट्रेलियाका डाक्टर एन्डी ट्यागले उक्त कुरा भनेका हुन्। रिपोर्ट गरे की यस वर्षको सुरुमा कोरोनो भाइरस बिरामीहरूबाट लिइएको विभिन्न परीक्षणहरूको विश्लेषण गरेपछि उनलाई लाग्यो कि पादले गर्दा कोरोनाभाइरस हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । उनले आफ्नो अनुसन्धानलाई आधार बनाउँदै कोभिड–१९ का ५५ प्रतिशत बिरामीहरूमा पादका कारण कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको बताएका थिए ।
Previous मुखभित्र आउने घाउ यति खतरनाक..
Next संक्रमित बढेसँगै उपत्यकामा भेन्टिलेटर र आइसियूको चरम अभाव